ग्राम्सकीः चेतनाले निरासाबादी, संकल्पले आशावादी - Jagaran Post
ग्राम्सकीः चेतनाले निरासाबादी, संकल्पले आशावादी
जागरणपोस्ट १४ बैशाख २०७८, मंगलवार ०९:३०
एन्टोनियो ग्राम्सकीको जन्म १८९१ मा इटालीको सार्डिनिया भन्ने ठाउँमा भएको थियो । ग्राम्सकीको बाल्यकाल र सम्पूर्ण जीवन नै एकदमै दयनिय थियो । उनलाई ३ बर्षको उमेरमा मेरुदण्ड सम्बन्धि रोग लाग्यो । जसको उपचारको लागि उनलाई काभ्र्रो बाधेर घरको छतको सिलिङ्गमा झुन्ड्याईन्थियो ।
ग्राम्सी बचपनमा यो हदसम्म बिरामी परिरहन्थे कि डाक्टरले उनी बाँच्छन् भन्ने आशा नै त्यागी सकेका थिए । र उनकी आमाले आफ्नो कोठामा एउटा कफन र एक जोर नँया लुगा ठिक्क पारेर राखेको हुन्थिन् । यो रोग र यसको उपचारको कारण ग्राम्सीको शरीर विकृत बन्यो । उनको ढाड र छाती दुवै तिर कुम्लो निस्केको थियो । ग्राम्सीको उचाई जम्मा ४ फुट १० इन्च मात्र थियो ।
एन्टोनियो ग्राम्सकीका बुवा फ्रान्सिको ग्राम्सकी मध्यम तहका सरकारी कर्मचारी थिए । फ्रान्सिको ग्राम्सकी राजनीतिक प्रतिशोधको सिकार बनेर भ्रस्टाचारको आरोपमा साढे पाँच बर्ष जेल परे । यसले ग्राम्सकीको परिवारलाई आर्थिक रुपमा तहसनहस गर्यो ।
पढाईमा अत्यन्त तेज हुँदाहँुदै पनि उनले ११ बर्षकै उमेरमा स्कुल छोड्नु पर्यो र काम गर्न थाले । ग्राम्सकीले आफ्नो शाररिक दुर्बलताका बाबजुद पनि सरकारी पंजीकरण कार्यालयमा दिनको १० घण्टासम्म आफुभन्दा गर्हौ फाइल र रजिस्टरहरु बोकेर यताउता गरिरहनु पर्थियो । करिब दुई बर्षसम्म यो काम गरेपछि फेरी ग्राम्सकी स्कुलमा फर्के र आफ्नो माध्यमिक शिक्षा पुरा गरे । ग्राम्सकीलाई उनले बचपनमै भोग्नु परेको शारीरिक अस्वस्थता, शारीरिक कुरुपता र आर्थिक अभावले गहिरो मनोबैज्ञानिक प्रभाव पार्यो । जसले गर्दा उनमा समाजबाट अलग भएर बस्ने र अन्तर्मुखी स्वभाव बिकाश भयो । जुन उनको जीवनमा पटक पटक देखा परिरह्यो ।
त्यस पश्च्यात उनले इटालीको ठुलो औधोगिक सहर टुरिन रहेको टुरिन बिश्वबिद्यालयमा छात्रवृति पाएर अध्ययन गर्न थाले । तर उनको अध्ययनलाई आर्थिक अभाव, शाररिक दुर्बलताले ग्रस्त पारिरह्यो । हात–मुख जोड्ने समस्या र छात्रवृति कायम राख्नका लागी हासिल गर्नुपर्ने शैक्षिक सफलताको दोहोरो बोझको मारमा ग्राम्सकी परिरहे । यस्तै अवस्थाका बाबजुद पनि ग्राम्सकीले बिश्वबिद्यालयमा भाषाशास्त्र, इटालियन साहित्य, दर्सनशास्त्र र कानुनको गहन अध्ययन गरे । तर यिनै आर्थिक, शारीरिक र मनोबैज्ञानिक समस्याका कारण उनले डिग्रीको अध्ययन अधुरै छोड्न बाध्य भए ।
विश्वबिद्यालय अध्ययनकै क्रममा एन्टोनियो ग्राम्सकी समाजबादी पार्टीमा लागेका थिए । पढाई छोडेपछि उनि पूर्ण रुपमा राजनीति र पत्रकारितामा लागे । यहि क्रममा १९२१ ग्राम्सकी इटालियन कम्युनिस्ट पार्टीको संस्थापक सदस्य मध्ये एक बने । १९२२ मा ग्राम्सकी इटालियन कम्युनिस्ट पार्टीको प्रतिनिधिको रुपमा रुस पुगे । जहाँ उनको बिबाह एक रुसी महिला जुलिया अप्लोनोव संग भयो । उनका दुई छोरा भए । जसमध्ये कान्छा छोरालाई ग्राम्सकीले देख्न पनि पाएनन् । ग्राम्सकी रुसबाट फर्किदा इटालीमा मुसोलिनीको फासीवादको जगजगी सुरुभैसकेको थियो । रुसबाट फर्किन साथ ग्राम्सकी इटालियन कम्युनिस्ट पार्टी प्रमुख बनेका थिए । संसदीय उन्मुक्तिका बाबजुद पनि ग्राम्सकीलाई सरकारले गिरफ्तार गर्यो । उनलाई मुद्धाको क्रममा अदालतमा सरकारी पक्षले जिकिर गर्यो–यो दिमागलाई २० बर्षसम्म काम गर्नबाट रोक्नुपर्छ । अदालतले ग्राम्सकीलाई तल्काल ५ बर्षको जेल सजाय दियो । जसलाई अर्को बर्ष बढाएर २० बर्ष पुर्याईदियो । तर मुसोलिनीको फासिवादी सत्ताले उनको दिमागलाई काम गर्नबाट रोक्न सकेन ।
ग्राम्सकीले आफ्नो जेलजीवनका ११ बर्षको दौरान ३३ वटा नोटबुकमा करिब ३ हजार पेज जति आफ्ना बिचारहरु लेखे । जो अहिले प्रिजन नोटबुकको नामले प्रख्यात छ । त्यसबाहेक अरु ५ सय वटा जति व्यतिगत पत्रहरु पनि लेखे । ग्राम्स्कीको चिन्तन मुलत क्रान्तिको स्वरुप, राज्य र नागरिक समाजको सम्बन्ध, सान्स्कृतिक आधिपत्य र बुद्धिजीवीका बारेमा केन्द्रित छ ।
ग्राम्सकीको जेल जीवन अत्यन्त्य कस्टकर थियो । जेलजीवनकै दौरान उनका सबै दातहरु झरे, पाचन प्रणालीले काम गर्न छोडेको थियो, रगत बान्ता गर्थे र यति सार्हो संग टाउको दुख्थियो कि उनि भित्तामा आफ्नो टाउको ठोक्याउन थाल्थे । ग्राम्सकी भाउजुको अथक पहल र अन्तरास्ट्रिय अभियानपछि उनलाई ८ बर्षपछि बल्ल उपचारको लागि जेल बाहिर अस्पतालमा लगियो । तर उनको स्वास्थ्य धेरै बिग्रिसकेको थियो । त्यहाँबाट २ बर्षपछि बल्ल अरु थप उपचारको लागि रोम लगियो । तर उनि धेरै दिन बाचेनन् । २१ अप्रिल १९३७ मा उनको मृत्यु भयो । ६ दिनपछि उनको कारावास सजाय समाप्त हँुदै थियो । ग्राम्सकी जम्मा ४७ वर्षका थिए ।
ग्राम्सकीको मृत्युको केही दसकपछि जब उनका प्रिजन नोटबुकहरु बाहिर आए र इटालियन भाषाबाट अरु भाषामा अनुवाद हुनथाले उनको महत्व क्रमश बढ्दै गयो । अचेल ग्राम्सकीलाई मार्क्सादी दर्सनमा मार्क्स पछिका सर्बाधिक महत्वपुर्ण चिन्तक मानिन्छ !
कृषि अनि जन्मभुमिसङ्ग जोडिएको प्राकृतिक प्रेम !
देश परिवर्तनमा युवापुस्ताको भूमिका
छिमेकी होस् त चीन जस्तो
पत्रकारमाथी `दफा ४७´ को हतियार